မုဒိမ်းညမ်းဂိမ်းများ–မုဒိမ်းစိတ်ကူးယဉ် Xxx ဂိမ်းများ
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတားမြစ်ထားပါတယ်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို၏ဤလောကအတွက်။ ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်ဆောသည်အရာတစ်ခုခုကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ တူတစ်ခုခုသင်ျဥပမာအားဖြင့်။ ဒါပေမဲ့လောကအတွက်ညစ်ညမ်းများ၊သင်ျသည်။ ဘာမှမရှိဘူးရဲ့ဆောကမိသားစုတားမြစ်ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့အပေါင်းတို့သည်ဝန်ခံကြပြီဒါဟာစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့ချပြီးအပေါ်ထွက်ကြီးညမ်းည့္ဒီမိခင်ထြင္ခဲသားနှင့်ဖေထြင္ခဲသမီးဖြစ်လာစံ။ ဒါဟာဆုံးရှုံးအားလုံး၎င်း၏တန်ဘိုး။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့သိရကြဘူးဆုံးရှုံးစျေးတန်ဖိုးမှာအားလုံးကျော်အနှစ်? မုဒိမ်းစိတ်ကူးယဉ်။, ထိုဆန့်ကျင်တွင်၊ပင်ပိုနခ်စ္သူျအတိတ်နှစ်ပေါင်းအတွက်။ အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးဟန်တူသည်မုဒိမ်းစိတ်ကူးယဉ်။ နောက်ကျောကာလ၌ဤတားမြစ်ထားပါတယ်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်မကြာခဏကိုးကားအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ ယခုပင်အရိပ်အမြွက်မှကြည့်ရှုသူရဲ့မုဒိမ်းစိတ်ကူးယဉ်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်တက်ခူးဒီပူပြင်းတဲ့အာလူး။
သို့သော်၊အချို့သောညစ်ညမ်းထွင်တဲ့သူမဟုတ်သူအဖွဲ့ဝင်များ၏အများပြည်သူသူတို့အလုပ်လုပ်ကြောင့်လွတ်လပ်ပြီးသူတို့နေထိုင်ရာအတွက်မြေ၏အရွယ်ရောက်ဖျြော။ ငါအကြောင်းပြောနေတာအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းတီထွင်သူအပြေးအလတ်စားအတွက်အရာအားလုံးကိုခွင့်ပြုထားသည်ကြောင့်ဘာမှကိုအစစ်အမှန်။ အတွက်ဤသွင်ပာင္တယောက်မျှမရနိုင်ထိခိုက်ဒါဏ်သို့မဟုတ်။ အပြင်အရူးအရောက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလိင်အများအားဖြင့်ဝင်အပေါ်တွင်အပြာကား၊စစိတ်ကူးယဉ်ကဲ့သို့အဓမ္မအရာသာပြည့်စုံမည်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းကစား။ ဒါကအတိအကျဘာကိုမုဒိမ်းညမ်းဂိမ်းအတွက်ထောက်ပံ့။, ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်း၏အမာခံညစ်ညမ်းဂိမ်းများသောအားချဉ်းကပ်၍မုဒိမ်းစိတ်ကူးယဉ်ကနေအားလုံးသည်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်၊ထို့ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအားကစားသမားအဘယ်သူသည်တက်အဆုံးသတ်ထားပါသည်ဆိုက်ပေါ်တွင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အရာတစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိဖို့နှိုးဆွသူတို့ကိုသူတို့ကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျဆင်း။
အခါကျနော်တို့အတူတကွသွင်းထားဒီစုဆောင်းမှု၊ကျနော်တို့ကြောင်းသိရှိလိမ့်မည်သောသူနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့လာမည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်မှာကစားရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းဖို့ကြိုးစားနေကျေးဇူးပြု၍အချို့သောသူတို့၏အမှောင်ဆုံးနဲ့အလိမ်စိတ်ကူးယဉ်။ ေသာ္လည္းနခ်စ္သူျရာ၊ယောက်ျား၏အိပ်မက်ခြယ်လှယ်နှင့်အမျိုးသမီးအိပ်မက်မက်ခြင်း၏ရက်စက်စွာကြီးစိုး။ ကျနော်တို့ဂိမ်းအတွက်လူတိုင်းအတွက်ဒီအပေါ်။ အဆိုပါလက်တွေ့ကျကျမုဒိမ်းဂိမ်းများအများအားဖြင့်တန်ဖိုးထားပြီးအားဖြင့်ကစားအမျိုးသမီး။ သူတို့အမြင်အစစ်အမှန်ယောက်ျား၏အားသာချက်ယူတိုင်းပေါက်၏အကူအညီမဲ့မိန်းကလေးများအတွက်ဂိမ်းနှင့်အတူအဘယ်သူကိုဖော်ထုတ်။, အခြားတစ်ဖက်တွင်၊သူအမျိုးသားများတက်အဆုံးသတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ပိုပြီးသို့အဆိုပါစိတ်ကူးယဉ်နှင့်သဘာဝအဓမ္မ roleplay အမျိုးအစား။ ယောက်ျားတွေအပေါ်မုဒိန်းကားဂိမ်းများကစားနေကြသည်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းလိုး tentacle ဂိမ်းများနှင့်နဂါးဂိမ်းအတွက်အရာ၏တူညီသောမျိုးမဲ့မိန်းကလေးများအလိုက်နှင့်အင်-မာသဂြိုလ်ခြင်း၊နတ်ဆိုး၊သဘာဝလွန်သတ္တဝါနှင့်ဖုတ်ကောင်။ အမျိုးသားများလည်းပျော်မွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေး၏လိင်အဓမ္မ။ မှကြွလာသောအခါအမျိုးသမီးအပေါ်လူမအိပ္ပဲဂိမ္း၊အရေအတွက်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးသူတို့ကိုပျော်မွေ့သည်။, ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောကြောင့်ကအမျိုးသမီးချစ်ဒဏ်ခတ်အမျိုးသားများနှင့်အတူသိုင်းကြိုး-တွင်နှင့်ကြက်နှင့်ဘောလုံးညှဉ်းပန်း၊အစဉ်အမျိုးသားများအချစ်ခြင်းစိုးကၡမ်ားသွင် mistresses နှင့်မျှမသနားတျော၌သူတို့ရဲ့မျက်စိကို။
ရလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းအမျိုးမျိုးမှလူအပေါင်းတို့သည်အခြား xxx ဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းကျွန်ုပ်တို့၏။ အရာအားလုံးကိုကြည့်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းနှင့်စနစ်တကျဖွဲ့စည်း။ ကျနော်တို့ထဲမှာထည့်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုရေးသားဖော်ပြချက်ကိုအားလုံးဂိမ်းများနှင့်တွဲစနစ်တကျသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်သော့ချက်စာလုံးများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြအဖြစ်သေားအတွက်ပေါ်မယ့်အရေးယူ။ ဖွင့်ပြီးတာနဲ့တွေ့ရှိကြောင်းဂိမ်းအကိုက်ညီသင့်ဓမ္မစိတ်ကူးယဉ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကစားရန်ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်။ မရှိပါဒေါင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်နှင့်သင်မလိုအပ်ပါဘူးဆိုတိုးချဲ့ဖို့။ နှိပ်ပါအပြီးဂိမ်းစတင်လာလိမ့်မည်။, အချို့ဂိမ်းများကြာနိုင်ပါသည် ၃၀ စက္ကန့်မှဝန်ဖွင့်၊ဒါပေမဲ့သူတို့သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကစားရန်သူတို့နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမနောက်ကျသို့မဟုတ်ကြားခံအချိန်။ သင်ကပင်နိုင်ကစားပြီးနောက်သူတို့ကို disconnecting ကိုအင်တာနက်ကနေ။ ဒါကဘယ်လိုအာမခံအကြောင်းသင်ရလိမ့်မယ်အရည်အသွေးဂိမ်း။ နောက်ထပ်အရာကျနော်တို့သေချာဖန်ဆင်းတော်၏ဖန်တီးသောအခါဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးပူဇော်ဖို့သင်လုံခြုံပြီးလုံခြုံတဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများ။ ကျွန်တော်မမေးကြဘူးအတွက်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်မှသင်နှင့်ဆက်သွယ်မှုဝှက်ထား။ တယောက်မျှမသိကြလိမ့်မည်သင်ဒီမှာပါဒါမှမဟုတ်သင်ကကစားဖြစ်ကြောင်းသမျှသောဤဂိမ်း။, ရုံသေချာအောင်မှမထွက်ခွာရန်အပြေးအပေါ်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာအခါသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက်လာ။ ကိစ္စအများစုအတွက်၊အဓမ္မစိတ်ကူးယဉ်တည်းဖြစ်ကြ၏အစစ်အမှန်အဆော၏အစိတ်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်။ ဤစိတ်ကူးယဉ်မမိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေနှင့်အမပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူမိတ်ဖက်။ ဒါကြောင့်၊အကောင်းဆုံးကိုသူကဖွင့်ဖို့သေချာအောင်သင်ရကြဘူးဖမ်းမိကစား။ ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းစောင့်ရှောက်ရန်အသင့်ဖြစ်သေားလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုနှင့်အခုတော့သင့်ရဲ့လှည့်။
ပြီးနောက်သင်ဖတ်ပြီးပါပြီအားလုံးအကြောင်း၊သင်နီးပါးယုံကြည်သောငါတို့အားကစားပြိုင်ပွဲဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်နိုင်ဘူးအိမ်၊ကုန်အံ့တယောက်တည်းအခမဲ့။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာငါတို့သည်သင်တို့! သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးယူမှငါ၏နှုတ်ကပတ်။ ပဲမဆိုအပေါ်ဂိမ်းများကစားခြင်းကိုစတင်။ နေစဉ်သင်ဂိမ်းသို့မဟုတ်ရာက္ၾစုဆောင်းခြင်း၊သင်တို့သည်လည်းသတိပြုမိအရာတစ်ခုခုသည်။ အရူးနဲ့လူအပေါင်းတို့သည်အခြားအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားဆိုဒ်များ။ ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်-ကြော်ငြာအပေါင်းတို့ကိုပြန်အဓိကဆိုဒ်မှ။ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမနှောင့်အယှက်ကြော်ငြာတွေသို့မဟုတ်ပြန်ညွှန်းလင့်များ။ အရာခပ်သိမ်းသည်စင်ကြယ်၏နှင့်အလုပ်သင့်အားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အနေအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အဖြစ်ကြာမြင့်စွာဖြစ်နိုင်။, ကျနော်တို့အများ၏စုံတွဲတစ်တွဲအလံကိုကြော်ငြာတွေအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း၊ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ထိပ်ဆုံးဦးရေတိမ်တဲ့ကုမ္ပဏီအရာစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဆိုဒ်များအပေါ်သူတို့ကြော်ငြာသူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်။ သူတို့မလိုချင်သောစေနှင့်အတူဂိမ်းကစားဆိုဒ်များည့္ဒီစုတ်ကြော်ငြာများနှင့်နှောင့်အယှက်လုပ်ပါနှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအလုပ်ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ။